China Iqanda packer umshini ifektri kanye nabaphakeli | IMin-Tai
a) lo mshini ungaxhuma namaqanda phakathi kweqoqo lohlelo noma umugqa wokukhiqiza amaqanda wokuhlanza.
b) ibekwa ngesisindo seqanda bese ipakisha ngokuzenzakalela, ngenkathi ilungisa inqwaba, ilungele ukugcina iqanda;
c) Ukusebenza kwesikrini sokuthinta, kungasethwa emazingeni ehlukene wesisindo, kuze kufike emakilasini ayisithupha.
d) ilungele 6 * 5 = 30 amathreyi wamaphepha noma amathreyi epulasitiki
e) ungakhetha ukuthumela okuzenzakalelayo noma ukuthumela ngesandla
a) I-accumulator: Amaqanda athuthelwa etafuleni le-accumulator ngamaqanda amabhande okuqoqa amaphakathi, ngokuhleleka okuhlelekile kweqanda lonke, ukugeleza okungenayo kwamaqanda kulawulwa inzwa ukuvimbela ukugcwala ngokweqile;
b) Ukulungiswa kwamaqanda: Umshini uzogcina amaqanda esiqondisweni esifanayo, uhlangothi olukhulu lubheke phezulu, olungaqinisekisa ukusha kwamaqanda;
c) Imishini yokupakisha amaqanda: Amaqanda abekwa kahle futhi ngobumnene emathileyi ngenzwa yamanje yeqanda, afakelwa ukucaciselwa okuhlukile kwezinto zokwakha ama-tray amaqanda;
d) ukulethwa kwethileyi leqanda: Ngokuya ngesimo sangempela, ithreyi leqanda lingahlukaniswa libe yizinhlobo ezimbili zethreyi ezenzakalelayo noma ezithunyelwa ngesandla.
e) ukulethwa komkhiqizo okuqediwe: Ngemuva kokufakwa kwamaqanda bese kuthuthwa yi-conveyor, ingaqoqa nge-palletize yesandla noma ezenzakalelayo; (Uma usebenzisa itreyi stacker, ingahle isethwe kuhluke inani lamathileyi, njengokufaka i-2/4 / 6.)
3. Imingcele yezobuchwepheshe
Amaqanda / ihora angama-30,000-36,000
Usayizi (L * W * H)
Umshini wokupakisha wepulazi usetshenziswa kabanzi emapulazini enkukhu (noma amadada) nasezitshalweni zokucubungula amaqanda. Yehlisa izindleko zabasebenzi, uthuthukise ukusebenza kahle komsebenzi.
Langaphambilini Umshini wokupakisha amaqanda
Olandelayo: Ukuqandusela umshini wokupakisha amaqanda
Imishini Yokupakisha Amaqanda
Okuzenzakalelayo Egg Breaking Machine, Umshini Wokubhoboza Iqanda Elibilisiwe, Abakhiqizi Bomshini Wokuphula Amaqanda, Ukuchamisela Iqanda Packer, Iqanda Ukuhlela Futhi Ukupakisha Machine, Egg Ukupakisha Machine,